Hlala ngendlela efanele emotweni
Fanelesibonge Bengu | March 15, 2021
ISIKHULU seMasterDrive, u-Eugene Herbert, sithi uma umshayeli noma umgibeli engahlali kahle noma ufase ibhande ngendlela efanele ubuchwepheshe bokubavikela bungadala umonakalo omkhulu.
Uthe abashayeli nabagibeli abafasa kahle amabhande futhi abahlala kahle banciphisa amathuba okufa ngo-67%.
"Lokhu kukhombisa ukubaluleka kokusebenzisa ezokuphepha ngendlela. Abantu abaningi, bengazi noma bazi, bahlala ezimotweni hhayi ukuvimba ubuchwepheshe bokuphepha ukuthi busebenze kahle kuphela kodwa ngendlela engadala okunye ukulimala."
Uthe nazi izindlela ezinobungozi zokuhlala:
- Izinyawo kudashboard: Ama-airbag aphuma ngesivinini esifinyelela ku-250km/h. Uma iphuma izinyawo zikwi-dash, esikhundleni sokukuvikela ingaphula amathambo emlenzeni, okhalo noma emgogodleni nokungaholela ekutheni ufe.
- Ukuhlala ugone ingane noma isilwane: uncisha ingane ithuba lokuthi ifase ibhande uyenze ukuthi iphume ngewindscreen ngesivinini imoto ehamba ngaso. Uma i-airbag iphuma izoshaya ingane noma isilwane ngesivinini esingu-350km/h.
- Ukuhlala ngemuva ungalifasile ibhande: engozini abantu abangalifasile ibhande nezilwane bazoshaya ezihlalweni zangaphambili ngesivinini imoto ebihamba ngaso. Lokhu ngeke kulimaze abangemuva kodwa kungabulala abagibeli abangaphambili.
- Ukungalifasi ngendlela ibhande: ibhande kumele lifaswe naleli elincane elingezansi okhalo leli elide lihlale ngasentanyeni. Kumele lingahlali entanyeni noma ngaphansi kwengalo.
- Gwema ukuhlala uqethuke ingalo iqonde ibambe isiteringi. Awuboni kahle phambili futhi isiteringi awusibambi kahle. Hlala ngendlela yokuthi uma uqondisa ingalo isihlakala sithinta phezu kwesiteringi futhi ingalo iyagoba kancane.